izincwadi Wezingane mayelana yoga | Apg29
Yoga kuthatha esikoleni kanye enkulisa.
Kodwa kwenzakalani manje? Nokho, i-yoga ixhunyaniswe ubuHindu, kungenzeka ngokukhululekile wayekwenza, kokubili izinkulisa kanye nezikole!
Kwethulwa Yoga izingane IsiSwidi in izinkulisa kanye nezikole. Sekuyisikhathi ukukhuluma!
Manje ubona ushintsho olukhulu zasenkulisa esikoleni. Izikole eSweden ayekade ingxenye imvelo Christian, emaculweni sokuzinikela ekuseni.
Kwabe sekufika isikhathi lapho izikole nanikhululekile izakhi yobuKristu. Ngemva manje ishintshile isithombe futhi, njengoba zasenkulisa esikoleni manje ukuvulelwa yoga.
Kuyinto kusukela osopolitiki ehola futhi iziphathimandla zesikole kugcizelelwe ukuthi kubaluleke kangakanani esikoleni sethu uyikholwa hlangothi. Akekho umKristu noma umthelela iyiphi enye inkolo sika kuzokwenzeka.
Okwamuva wukuthi kusuka kuhulumeni baphume ngesithembiso sokuthi izikole ngeke besakwazi bavunyelwe. Lokhu sihlose isiphakamiso ukuyeka izingane esikoleni bachayeka emathonyeni okungamhloniphi zenkolo.
Lokho manje ivumela le futhi uthi akusiyo ngenkolo, imibukiso nje indlela inkolo abangenalwazi noma ukuzikhohlisa wena. I fi NNS asikho isizathu esamukelekayo ngoba kudedelwa le-yoga khulula izingane.
Thina ngaphambilini ngendlela izinto fl ertal eboniswa ku uxhumano Hinduism. Lapha fi NNS isikhala esikhulumi ukwenaba lokhu, kodwa nje sifuna aveze ukuthi yokuthi yoga has endaweni emaphakathi ubuHindu, awukwazi ukuchaza away. Igama elithi "yoga" lingabonakala elihunyushwe ngokuthi "insindiso". Ngako-ke tindlela imibono nemikhuba yenkolo ecacile.
Kungabuye okukhulunywa ukuthi obanzi kunayo yonke imiBhalo wamaHindu emhlabeni olusentshonalanga Bhagavadgita. Le ncwadi inikeza likankulunkulu wamaHindu Krishna, le-yoga okuyinhloko. Can uxhumano Hinduism kube sobala? Ngisho nokuphathwa Ezemfundo kufanele akwazi ukuthola lokhu.
Ingabe kufanele ezikoleni nasezikhungweni preschools kuyoba indawo ukukhangisa for yoga? Khona-ke kufanele futhi nezinye izinhlobo zenkolo futhi ukubonakaliswa babe isikhala efanayo ukuthi i-yoga has.
Kwabanye, lokhu kuyindlela ithonya, okuyinto kudala isithakazelo yoga kusukela zisencane. Lesi sithakazelo lingatholakala athuthukiswe ukuthi ubhalisele izifundo nge abafundisi, ngubani imali enkulu kuwo yavusa isithakazelo e-yoga.
Lubonakala njengenhlangano engakafi ezingenacala yoga ukuze kwencani, ungakwazi ke zibe ifomu kakhulu enamandla ye-yoga, kundaliniyogan. I fi NNS izimo eziningi lapho abantu baye bahlupheka kakhulu lapho abaqhuba le ndlela-yoga. Ukuze uthole olunye ulwazi bheka: http://kundalini.se
Ingabe Agency kaZwelonke obhekene ngokuvumela yoga izingane, okungaba wokuya into ekugcineni kuholela ukugula kwengqondo?
Lesi sihloko kusukela magazini amalangabi izinombolo iminyaka emibili 2018th